Miyuu yahay wareegga cirifka iyo cawaaqib xumada ay leedahay | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan ka hadli doonnaa dhacdo aad u khaas ah oo saadaasha hawada oo loo yaqaan wareega polar. Dad badan ayaa ula dhaqma sidii wax ifafaale ah oo keenaya in cirifka woqooyi uu u sii dhaqaaqo koonfurta. Taasi waa, waxa ay qabato waa in heerkulka guud ahaan aagga woqooyi ee waqooyiga, iyadoon loo eegin tiirka.
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonnaa waxa wareegsan cirifku yahay iyo cawaaqibka ay ku yeelanayso cimilada woqooyiga bari.
1 Muxuu yahay wareegga cirifku
3 Cawaaqibta wareegga cirifka
4 Xiisaha xuubka wadnaha
Muxuu yahay wareegga cirifku
Markii aan ka hadlayno wareegga cirifka waxaan ula jeednaa aag ballaaran oo cadaadis hooseeya oo u dhow cirifka Dunida. Caadi ahaan, wareegga cirifku wuxuu ku badan yahay cirifka woqooyi. Aaggan cadaadiska yar wuxuu ka kooban yahay hawo qabow daran oo ka dhigeysa heerkulka si aad ah hoos ugu dhacaya. Waxaa loo yaqaan 'vortices' maxaa yeelay waxay loola jeedaa wareegga ay dabayshani leedahay dhinaca saacad-wareegga waxayna u oggolaaneysaa hawada qabow inuu muddo dheer sii joogo ulaha. Voctex polar-ka ayaa daciifa xagaaga wuuna xoogeystaa xilliga qaboobaha.
Mararka qaar inta lagu jiro xilliga qaboobaha woqooyi wareegan ayaa sababa hawo qabow inay u sii socoto koonfurta oo ay weheliso qulqulka diyaaradda. Tani waxay si joogto ah u dhacdaa inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxayna la xiriirtaa mowjado qabow daran oo ka yimaada Arctic ee Mareykanka. Hirarkii ugu dambeeyay uguna daran ee qabow ee dhaca waa Janaayo 2014.
Dhacdadan saadaasha hawada waxaa badanaa jahwareeriya kuwa kale oo waligoodba joogay. Ereygan ayaa dhawaanahan caan noqday adeegsiga khabiirada saadaasha hawada. Saynisyahannadan waxay baaraan wareegga cirifka iyagoo falanqeynaya xaaladaha ku dhaca tobanaan kun oo cagood jawiga. Si kastaba ha noqotee, marka heerkulka la xiriira dhacdadan saadaasha hawada ay hoos u dhacdo, gobollada dhulka qaarkood si daran ayaa loo saameeyaa. Dhacdadan kuma koobna oo kaliya Mareykanka, waxay sidoo kale ka dhacdaa qaybo ka mid ah Yurub iyo Aasiya. Khatarta kaliya ee ifafaalahani dadka u matali karto ayaa ah baaxadda uu heer kulku hoos u dhacayo, iyadoo diraya hawo qabow oo ku faafta aagagga koonfurta oo aan badanaa qabow ahayn.
Maaddaama ay saameyn ku yeelan karto gobollada aan sida caadiga ah qabow ahayn, waa iska caadi saamaynta qaarkood inay ku dhacdo dadka iyo dhirta iyo dugaagga. Si kastaba ha noqotee, ha ka nixin markii aad maqasho macluumaad ku saabsan wareega wareega. Waxa kaliya ee muhiimka ah waa in loo diyaar garoobo sidii loo adkeysan lahaa heerkulka ka hooseeya kan caadiga ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka hubisid waxyaabaha aan ka helno sahayda deg-degga ah ee guryaha iyo gawaarida si ay ula jaanqaadaan xilliga qaboobaha isla markaana loo hubiyo inaad u diyaar garoobi karto halista ay duufaannada jiilaalka wataan.
Mid ka mid ah cawaaqibka ugu weyn ee dhacdadan saadaasha hawada ayaa ah in Badhtamaha Galbeed ee Mareykanka ay barafoobaan. Dareenka kuleylka ee magaalooyinka qaarkood wuxuu gaaraa illaa -50 digrii. Si kastaba ha noqotee, heerkulka dhabta ahi wuxuu u dhexeeyaa -20 iyo -30 digrii. Inta soo hartay waa dareenka kuleylka ee ay keento dabaysha cirifka. Si loo yareeyo cawaaqibka ifafaalehan, magaalooyin badan waxay furaan guryo ku habboon in lagu xareeyo dadka aan si fiican isaga ilaalin karin qabowga iyo in badan oo ka mid ah dugsiyadu way xirmaan. Ma aha in la xuso shirkadaha duulimaadyada baajiya duulimaadyada si looga fogaado cawaaqib xumo iyo shilal suurtagal ah.
Cawaaqibta wareegga cirifka
Waana in wareeggan cirifka ah ee soo saara aagga cadaadiska hooseeya uu ku wareegsan yahay suunka dabaylaha oo ku wareegaya jihada galbeed ee saacadda ka soo horjeedka. Sidan oo kale, waxaa lagu hayn karaa meel u dhow ulaha muddo dheer waana hawo qabow. Dhibaatada dhabta ah waxay soo baxdaa marka socodka uu daciifiyo kuleylka lama filaanka ah ee stratosphere. Kuleylka kuleylka ah ee stratosphere wuxuu awood u siinayaa hawo hawo qabow inay ka balaarto tiirarka una goyso latitude hoose. Tani ama waxay leedahay cawaaqibta meelaha aan sida caadiga ah loo isticmaalin qabowga daran. Dhirta, xayawaanka iyo bani'aadamkuba waa inay la jaanqaadaan heerkulkan inta lagu jiro waqtiga uu wareegayo wareega wareega.
Natiijo ahaan, marka stratosphere si lama filaan ah u kululaato, wareegga cirifku wuxuu noqdaa mid aan xasilooneyn wuxuuna u diraa hawada dhinaca koonfureed, taasoo saameyn ku yeelata meelo badan oo Mareykanka ah oo ay weheliso qulqulka diyaaradda. Dhacdadani ma aha wax cusub, laakiin markii ugu horreysay ee laga daabaco maqaalkan waxay ahayd 1853.Waxay kaloo la xiriirtaa mowjadaha qabow ee kale ee Waqooyiga Ameerika. diiwaan gashan Janaayo 2014, ama kuwii 1977, 1982, 1985 iyo 1989.
Waxa weheliya qabow iyo heerkul hoose, dhaxan baaxad weyn leh ayaa dhacda. Qabowgan ayaa nolosha ku adkeeya dadka aan u baran qabowga. Cawaaqib xumada qaar ee ka dhalata nolosha nolosha magaalooyinka ayaa ah in waddooyinka la jaro baraf saa’id ah awgood iyo waddooyinka isgaarsiinta qaarna ay xirmaan. Sidoo kale koronto la’aan ayaa ka jirta meelo badan oo ka mid ah magaalooyinka.
Xiisaha xuubka wadnaha
Ereygan waxaa loo yaqaanay jiilaalka 2014 sababtoo ah diirimaad diimeed oo saameyn ku yeeshay Waqooyiga Ameerika.
Ku dhowaad sannad kasta oo ay dhacdadani dhacdo, gacan ku haysa istiraatiijiyad waa ilaa 1.000 kiilomitir.
Si loo cabiro goobta iyo booska wareega wareega, cabirro badan ayaa looga baahan yahay barta lakabyada jawiga.
Vortices Tropospheric polar sidoo kale way jiraan wayna daciifan yihiin xagaaga wayna ka xoog badan yihiin jiilaalka.
Haddii ifafaalahanu daciif yahay, duufaannada xag-jirka ah ee u janjeera xagga woqooyi way isku dhacaan oo waxay ahaayeen gorgorro yaryar oo ka dhex jira durdurrada qulqulka. Wareegyadan yaryar badanaa waxay socdaan bil.
Qaraxyada Fulkaanaha ee ka dhaca kuleylaha waxay sababi karaan in wareegga cirifku uu xoojiyo dhowr jiilaal.
Sidaad aragtaanba, dhacdadan saadaasha hawada ayaa dhowaanahan caan noqotay waana muhiim in la ogaado saameynteeda si looga hortago cawaaqibkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay wareegga cirifka
Waa maxay tombolo